‘अप्रेसन अक्टुबर’को मुद्दा फैसला | चितवन पोष्ट दैनिक
‘अप्रेसन अक्टुबर’को मुद्दा फैसला
२०७० कार्तिक १५, शुक्रबार ०२:४६ गते
१५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना पाएका तान्जिङ निमा लामा ।
भरतपुर । गैंडा मारेर खाग बेच्ने गिरोह समाउन चितवन निकुञ्जले दुई वर्षअघि सञ्चालन गरेको ‘अप्रेसन अक्टुबर’का क्रममा पक्राउ परेका विरूद्ध चलेको मुद्दाको फैसला भएको छ । निकुञ्जले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर फैसला बारेमा जानकारी दिएको हो ।
निकुञ्जले विसं. २०६८ सालको असोज २९ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म सञ्चालन गरेको ‘अप्रेसन अक्टुबर’को क्रममा १७ जना समातिएका थिए । तीमध्ये निकुञ्जले ११ जनाको मुद्दा फैसला गरेको छ ।
गैंडा मारेर खाग तिब्बतसम्म पु¥याउने गिरोह नै समातिएको दावी निकुञ्जले गरेको थियो । गैंडाको खाग ३५ लाख रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको तथ्य पक्राउ परेका गिरोहबाट उजागार भएको निकुञ्जले सो बेलामा निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गैंडा मुद्दामा पक्राउ परेर तारेखमा रहेको तर मरेको भन्ने फर्जी कागज पेस गरेको आधारमा मुद्दाबाट छुटकारा पाएका व्यक्ति पनि सो अप्रेसनका क्रममा समातिएका थिए । निकुञ्जले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले असोज १६ गते सो गिरोहका विरूद्धको मुद्दाको फैसला गरेको उल्लेख छ । त्यस्तो चर्चित गिरोहका एकजनालाई मात्रै कानुनमा भएको अधिकतम सजाय भएको छ ।
गैंडा मारेर खाग बिक्री गर्ने काममा संलग्न भएको पुष्टि भए ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिबाना या पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद या कैद र जरिबाना दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । निकुञ्जले स्थायी ठेगाना तिब्बत भई काठमाडौँ बौद्ध फूलबारी बस्ने वर्ष ६८ का तान्जिङ निमा लामालाई मात्रै १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
निकुञ्जले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निमाले हुम्ला बरगाउँ घर भई बौद्ध बस्ने आङजिङ लामामार्फत ३५ लाख रूपैयाँमा खाग किनेको उल्लेख छ । निकुञ्जले आङजिङलाई १४ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको छ । तान्जिङ निमा गैंडा मुद्दामा ६० साल वैशाखमा पनि समातिएर साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
तर उनका आफन्तले मरेको भन्ने भारत सिलगढीको एउटा मेडिकलको कागजपत्र पेस गरेपछि तान्जिङको मुद्दा बन्द भएको थियो । उनै तान्जिङ विसं. २०६८ सालको कात्तिक १ मा आङजिङ र अर्का एकजना हिसी लामासँगै पक्राउ परेका हुन् । सो वर्षको असोज २९ मा नवलपरासीको त्रिवेणीमा प्युठानका महेश्वर भनिने खिमबहादुर केसी समातिएका थिए ।
त्रिवेणीबाट महेश्वर र एकजना महिला सुष्मा खनाल समातिएपछि निकुञ्जले काठमाडौं, चितवन र नवलपरासीबाट गरेर थप १५ जना समाएको हो । जसलाई निकुञ्जले ‘अप्रेशन अक्टुबर’ नाम दिएको थियो । गैंडा मार्ने, खाग झिक्ने, सो खाग किन्ने स्थानीय व्यापारी, स्थानीयले खाग बेच्ने काठमाडौंको व्यापारी र काठमाडौंबाट खाग बाहिर पु¥याउने सबै समातिएको निकुञ्जको दावी थियो ।
महेश्वरलाई निकुञ्जले १० वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ । महेश्वर र सुष्माबाट चार लाख २० हजार नेपाली रूपैयाँ र तीन लाख भारतीय रूपैयाँ फेला परेको थियो । निकुञ्जले चितवन बघौडाका किशोर चौधरी, वीरेन्द्र सहनी, बुद्धिराम महतो र नवलपरासी अग्र्यौलीका तिलकराम चौधरीलाई १४ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
त्यस्तै, बघौडाका मदारी महतोलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना, बघौडाकै लीलाराम महतोलाई आठ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना, नवलपरासी बुलिङटारका ऋषिकान्त बस्ताकोटीलाई आठ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना तथा नवलपरासी अग्र्याैलीकी कुसुमकुमारी थनेतलाई पाँच वर्ष कैद सुनाएको छ ।